Dhibaatooyinka uurka (Pregnancy problems)
Author Topic: Dhibaatooyinka uurka (Pregnancy problems) (Read 88453 times)
« on: June 06, 2008, 10:52:20 AM »
Inta aad uurka leedahay, waxa laga yaabaa inaad yeelatid xoogaa ah dhib iyo raaxo-daro hadba marka jirkaagu is beddelo. Isku day talaabooyinkan aasaasiga ah oo la hadal dhakhtarkaaga ama kalkaalisada si aad u heshid talo dheeraad ah. Ha isticmaalin wax ah dawooyinka la iska iibsan karo warqad dhakhtar la'aan ama dhir/geedo adiga oo aan marka hore la hadlin dhakhtarkaaga.
Waxaan qormadaan uga hadli doonaa dhibaatooyinka ugu caansan ee la soo dersa haweenada uurka leh waxaan ka mid ah:
Walac (Morning Sickness)
Hurdada oo dhib ah (Trouble Sleeping)
Cirib dhiigid (Bleeding Gums)
San cabur iyo san-goror (Epistaxis & Nose stuffiness)
Danqasho naaska ah (Tender Breast)
Bararka gacmaha iyo cagaha (Swelling of Hands and Feet)
Kaadi badni (Polyurea)
Calool-adag ama Shuban (Constipation or Diarrhea)
Dhabar-xanuun (Back pain)
Maroojis Lugta ah (Leg Cramps)
Xidido Dhiig oo Bararsan (Varicose Veins)
Dheecaan siilka ah (Vaginal Discharge)
Xanuun Caloosha ah ama Qabashooyin (Abdominal Pain or Contractions)
Xiriirka galmada (Sexual relations)
Isbeddelada Niyada ama Fikirka (Changes in Mood or Thinking)
Jamasho cunto (Food Cravings)
Maqaarka, Timaha iyo Cidiyaha (Skin, Hair and Nails)
Fadlan hoos u dhaadhac si aad u akhrisato warbixin ku saabsan dhibaato kasta.
Wixii su'aalo ku aadan waxaad na soo weydiin kartaan markii casharka uu dhamaado.
« Reply #1 on: June 07, 2008, 02:16:05 PM »
Lallabo ama dareen ah in calooshu jiran tahay waxa badanaa loo yaqaanaa walac. Waa caadi la isku arko inta lagu jiro 14 todobaad ee ugu horeeya uurka.
# Isku day inaad cuntid rooti, rooti qalalan ama siriyaal ka hor inta aanad ka degin sariirta subixii. Waxa laga yaabaa in cuntooyinkaasi ku gargaaraan wakhti kasta oo ah maalinnimada oo aad isku aragtid lallabo.
# Cun cuntooyin yaryar balse marrar badan cun halka aad ka cuni lahayd cunto weyn oo ah 3 wakhti.
# Iska ilaali in calooshaadu marnaato.
# Iska ilaali inaad dhakhso u jiifsatid ka dib marka aad wax cuntid.
# Iska ilaali cuntooyinka leh baruur badan, la shiilay, leh basbaas ama dufan.
# Iska ilaali urta cuntada.
# Wac dhakhtarkaaga ama isbitaalka aad haddii aanad awoodin inaad ceshatid cabitaanada mudo ka badan 24 saacadood, haddii aad leedahay kaadi madow ama aad dareentid tabar-dari ama wareer/dawakh.
Daal (Fatigue) iyo Hurdada oo dhib ah (Trouble Sleeping)
« Reply #2 on: June 08, 2008, 02:19:35 PM »
Inaad daal dareento waa caadi.
# Samee jimicsi maalin kasta haddii uu oggol yahay dhakhtarkaagu si tamartaadu u kororto.
# Naso marrar badan. U jiifso dhinaca bidix ugu yaraan 1 saac inta lagu jiro maalinnimada.
Hurdada oo Dhib ah
Marka uurkaagu sii weynaado, waxa dhib noqon kara inaad raaxeysatid oo seexatid.
# Iska ilaali cabitaanada leh kafeyn.
# Wax ha cunin wax yar ka hor wakhtiga jiifka.
# Isku day qubays ama mayrasho diiran ka hor wakhtiga jiifka.
# Samee jimicsiyada sida neefsasho xoog leh iyo iskala-bixin.
# U jiifso dhinaca bidix iyada oo barkin kuugu jirto lugaha dhexdooda kana hooseyso calooshaada.
Cirid dhiig, Sangoror iyo Naasa xanuun
« Reply #3 on: June 22, 2008, 07:55:44 PM »
# Isticmaal burush jilicsan oo si tartiib ah u nadiifi ilkaha. Maalin kasta mari ilkaha xarkaha ilkaha (floss).
Dhiig Sanka ah
# Waxa aad sankaaga ku dhibcin kartaa dhibco milixeysan ama waxa aad galin kartaa nooc labeen ah (gel).
# Si aad u joojisid dhiig sanka ka socda, fadhiiso ka dibna si adag farahaaga ugu cadaadi dhinaca sanka/dulka dhiiggu ka socdo.
Naaso danqanaya ama caano ka da’ayaan
# Xiro rajabeeto aan xoog kuu haynin sida keeshaliga isbortiga.
# Waxa laga yaabaa inaad gargaar ka heshid keeshali aan lahayn fiilooyin ama waayiro marka aad seexanaysid habeenkii.
# Keeshaligaaga gasho kuusaska naaasaha (nursing pads) haddii naasahaagu sii daynayaan caano.
Laabjeex iyo Bararka Gacmaha iyo Cagaha
« Reply #4 on: June 24, 2008, 06:04:20 PM »
# Laabjeexu waa dareen gubasho leh oo ah caloosha, dhuunta ama laabta.
# Iska ilaali kafeyn, wixii caano ah ama ka sameysan, cuntooyinka leh dufan, asiidh/aashito ama basbaas.
# Cuntooyin yaryar cun 2-3 saac kasta. Si tartiib ah wax u cun.
# Ka dib marka aad wax cuntid ha jiifsan muddo 1 saac ah.
# Ha gashan dhar ciriiri kugu ah.
# Ha iska laabin dhexda. Iska laab jilibaha marka aad foorarsanaysid.
# Ilaa 2 saacadood ha sameyn jimicsi marka aad wax cuntid.
# Seexo adiga oo madaxa sare ugu soo qaaday barkin labaad ama dheeraad ah.
# Ha cabin sigaar.
Bararka Gacmaha iyo Cagaha
# Iska ilaali inaad taagnaatid ama fadhidid mudo dheer.
# U jiifso dhinaca bidix mudo ah 30-60 daqiiqadood, 3-4 jeer maalin kasta.
# Samee jimicsi haddii uu dhakhtarku kuu oggol yahay.
# Iska ilaali cuntooyinka milixdu ku badan tahay.
# Booqo dhakhtarkaaga haddii aad toostid dhawr subax oo iska xiga adiga oo leh barar.
Kaadida oo Badan
« Reply #5 on: July 06, 2008, 08:33:50 PM »
# Tani waa caadi.
# Ha yareen cabitaanka ama biyaha, laakiin isku day inaanad cabin wax badan ka hor wakhtiga jiifka.
# Kaadi marrar badan.
# Samee jimicsiyada Kegel (la soco qoraal ku saabsan jimicsiga kegel) si aad u xoojisid oo u xukuntid muruqyada ku wareegsan siilka.
# Si aad u garatid meesha ay ku yaalaan muruqyadaasi, kaadida jooji oo dib u bilaw marka aad isticmaalaysid musqusha.
# Isku day inaad adkaysid muruqyada hadba in yar. Ka dibna si tartiib ah u sii daa.
# Marka aad adkaysid muruqyada, waa inaad dareentid aagga ku aadan ibta kaadida, ama meesha kaadidu ay ka soo baxdo, oo wax yar sare u kacaysa.
# Samee jimicsiyadaa marka aad fadhid, taagan tahay, soconaysid, baabuur wadid ama daawanaysid telefishanka.
# Samee jimicsiyadan 10 jeer, 5 ilaa 10 jeer maalintii.
# Wac dhakhtarkaaga haddii aad isku aragtid gubasho ama xanuun marka aad kaajaysid ama aad qabtid qandho.
Calool-adag ama Shuban
« Reply #6 on: July 15, 2008, 11:20:22 AM »
# Cab 6 ilaa 8 koob oo ah cabitaan maalin kasta. Dooro biyo, miir khudaar ama caano.
# Cun cuntooyiin uu ku badan yahay dufku (fiber) sida khudaarta iyo cagaarka aan la karin, xabuubka aan wax laga saarin (whole grain), siriyaalka uu ku badan yahay dufku (high-fiber bran cereal) iyo digirta qalashay ee la kariyay.
# Samee jimicsi haddii laguu oggol yahay.
# Ha isticmaalin dawada caloosha socodsiisa, dawo la galiyo malawadka ama dawooyinka la iska iibsan karo warqad dhakhtar la’aan iyada oo dhakhtarkaagu kuu sheego inaad isticmaali kartid mooyaane.
# Wac dhakhtarkaaga haddii aanad caloosha adag ka fiicnaan gudaha 2 maalmood.
Babaasiir/Bawaasiir iyo Dhabar-xanuun Khafiif ah
« Reply #7 on: July 20, 2008, 06:01:08 PM »
# Waa in saxaradaadu ahaato mid joogto ah oo jilicsan.
# Ha sameyn cadaadin ama riixid marka aad saxaroonaysid.
# Isticmaal duub qabow (cold compresses) si aad iskaga yareysid xanuun ama barar.
# Wac dhakhtarkaaga haddii xanuunkaagu sii kordho ama haddii dhiig-bax uu jiro.
Dhabar-xanuun Khafiif ah
# Naso marrar badan. Isticmaal furaash/joodari taageero leh. U jiifso dhinaca bidix iyada oo barkimooyin kuugu jiraan jilbaha dhexdooda, dhabarka xaggiisa dambe iyo caloosha hoosteeda.
# Toos u joogso. Ha isku yeelin tuur ama qalooc.
# Xiro kabo socod oo fiican oo cirib gaaban.
# Hal meel ha taagnaan mudo aad u dheer. Dhaqdhaqaaq samee.
# Kadaloobso si aad u soo qaadid alaab dhulka taala halka aad iska laabi lahayd dhexda. Ha iska laabin dhexda ama sinaha. Iska laab jilbaha.
# Samee jimicsi haddii uu dhakhtarkaagu kuu oggol yahay.
Maroojis Lugta ah / Xidido Dhiig oo Bararsan
« Reply #8 on: July 25, 2008, 08:16:30 PM »
Maroojis Lugta ah
# Maroojis lugta ahi waa caadi marka lagu jiro xilliyada dambe ee uurka.
# Kordhi cabitaanka, kaalshiyamta iyo bootaasiyamta ku jirta cuntadaada. Qaado cuntooyinka sida caanaha, caano-fadhiga ama yoogeer, muus/moos iyo miirka liin macaanta.
# Naso marrar badan iyada oo lugahaagu sareeyaan inta lagu jiro maalinnimada.
# Samee jimicsi haddii dhakhtarkaagu oggol yahay.
# Wakhtiga lagu maroojinayo lugta, toosi lugtaada oo cagtaada u laab xagga hore ee lugtaada.
# Gasho kabo socod oo fiican oo leh cirib gaaban.
# Wac dhakhtarkaaga haddii wakhti kasta hal lug kaliya ay ku xanuunayso, haddii ay jirto meel kulul ama cas oo ku taala lugta, ama haddii lugtu ku xanuunayso marka aad cagta u laabtid xagga hore ee lugtaada.
Xidido Dhiig oo Bararsan
# Xidido dhiig oo bararsan (varicose veins) waa xidido weynaaday oo aad ku arki karaysid lugahaaga.
# Iska ilaali lug-gashida (hose) ama lug-qabadka (girdles) leh cinjir kala jiidmaya.
# Iska ilaali inaad mudo dheer taagnaatid ama fadhidid.
# Qaado nasashooyin gaagaaban iyada oo lugahaagu ka sareeyaan wadnahaaga. U jiifso dhinaca bidix iyada oo barkimo kuu jirto lugaha dhexdooda iyo caloosha hoosteeda.
# Ha is weydaarin lugahaaga ama ha duugin lugahaaga ama cagahaaga.
« Reply #9 on: July 30, 2008, 07:53:22 PM »
# Isbeddel ku dhaca dheecaanka siilku waa caadi xilliga uurka.
# Marrar badan mayr aagga dibadda ah ee siilka. Isticmaal saabuun aan lahayn barafuun ama cadar. Si fiican u dhaqdhaq.
# Ha isticmaalin hoos-galis (tampons), buufin siilka lagu buufiyo, budo ama warqad musqul oo leh midab ama catareysan.
# Gasho hoos-gashi (nigis/matante) ah cudbi. Iska ilaali lug-gashi (hose), lug-qabatooyin (girdles) ama surwaal kugu dhaqan.
# U tag dhakhtarkaaga haddii dheecaanku leeyahay ur xun, uu sababo cuncun ama uu jiro dhiig.
Madax-xanuun / Hergab
« Reply #10 on: August 03, 2008, 07:41:37 PM »
# La xiriir dhakhtarkaaga marka aad rabtid dawooyinka la iska iibsado warqad dhakhar la'aanteed ee amaanka ah. Ha qaadan asbiriin, ibuprofen (Advil ama Motrin) ama naprosyn (Aleve).
# Wac dhakhtarkaaga haddii madax-xanuunku aanuu kaa tagin, haddii aad leedahay arag isku darsan ama dawakh, ama barar badan oo ah gacmaha ama lugaha.
# Iska ilaali inaad ag joogtid dadka jiran. Marrar badan dhaq gacmahaaga.
# Wac dhakhtarkaaga haddii aad qabtid qandho, neefsashada oo dhib kugu ah ama aad soo qufacaysid xaako.
# Wac dhakhtarkaaga haddii uu kuu soo dhawaaday qof qaba busbus ama caabuq dhuunta ah (strep throat).
« Reply #11 on: August 06, 2008, 09:15:34 PM »
# Waxa laga yaabaa inaad xanuun ka dareentid aagga miskaha dhexdooda marka uurkaagu sii weynaado. Xanuunkaasi waa uu ka sii dari karaa marka aad sameysid dhaqaaq dhakhso ah ama socod dheer.
# Wac dhakhtarkaaga isla markiiba haddii aad qabtid xanuun daran.
# Qabashooyinka loo yaqaano Qabashooyinka "Braxton Hicks" waa qabashooyin khafiif ah oo aan xanuun lahayn isla markaan aan joogto ahayn. Kuwaasi waa caadi umana baahna daweyn.
# Marka qabasho ku hayso, u jiifso dhinaca bidix oo naso. Gacmahaaga saar caloosha ka dibna dareen goorta qabashadu bilaabmayso iyo goorta ay dhamaanayso. Soo saar wakhtiga u dhexeeya qabashooyinka.
# Haddii uurkaagu ka yar yahay 9 bilood oo aad leedahay qabashooyin, cab 8-10 koob oo biyo ah gudaha hal saac. Haddii wali aad leedahay qabashooyin ah 4 ama ka badan gudaha hal saac ka dib markii aad cabtay biyaha, wac dhakhtarkaaga.
# Haddii aad ku jirtid bishii sagaalaad ee uurkaaga, wac dhakhtarkaaga haddii qabashooyinku ay kugu dhacayaan wax ka badan 6 jeer saacaddiiba, ay ku haynayaan wakhti ka dheer 15-30 sekan, ay xanuun yeeshaan, ama aad yeelatid dhiig ka imanaya siilka ama uu kaa yimaado dheecaan.
# Waxa laga yaabaa in dhakhtarkaagu kuu sheego inaad isla markiiba soo wacdid haddii aad isku aragtid qabashooyin.
Dawakh (Dizziness) / Xiriirka Galmada (Sexual relations)
« Reply #12 on: August 10, 2008, 08:01:52 PM »
# U jiifso dhinaca bidix.
# Si tartiib ah u beddel sida aad u meeleysan tahay.
# Si tartiib ah u kac haddii aad jiiftay.
# Cuntada si joogto ah u cun.
# Booqo dhakhtarkaaga haddii dawakhu kaa tagi waayo ama uu marrar badan kugu dhaco.
# Waa caadi inaad yeelatid isbeddelo ah xagga rabitaanka galmada inta aad uur leedahay.
# Galmada waa la oggol yahay wakhtiga uurkaaga iyada oo dhakhtarku kuu sheego si kale mooyaane.
# Waxa laga yaabaa inaad isku aragtid xoogaa ah maroojin dhawr daqiiqadood ka dib galmada.
Isbeddelada Niyada ama Fikirka / Jamasho Cunto
« Reply #13 on: August 13, 2008, 07:30:20 PM »
Isbeddelada Niyada ama Fikirka
# Waa caadi inaad yeelatid isbeddelo ah niyadda oo ka imanaya isbeddelada hormoonka (hormone) ee ka dhacaya jirkaaga.
# Waxa laga yaabaa inaad isku aragtid iloobid intii hore ka badan. Taasi waa caadi. Samee qoraalo xusuusin ah si ay kaaga gargaaraan inaad xusuusatid waxyaabaha muhiimka ah.
# U sheeg dhakhtarkaaga haddii aad ku fikiraysid inaad naftaada waxyeelo u geysatid.
# Waxa laga yaabaa inaad yeelatid jamasho cunto oo aan caadi ahayn inta aad uurka leedahay.
# Cun noocyo kala duwan oo ah cuntooyin caafimaad leh wakhtiyada cuntada iyo marka aad qaadanaysid cuntooyin fudud.
Maqaarka, Timaha iyo Cidiyaha
« Reply #14 on: August 18, 2008, 07:30:56 PM »
# Waxa dhici karta in timahaaga iyo cidiyahaagu dhaksho u koraan. Haddii aad ku talo-jirtid in timaha laguu mariyo kiimikooyin, u sheeg timo-dhisaha inaad uur leedahay.
# Dhibaatooyinka maqaarka oo caadiga ah waxa ku jira isbeddelo ah midabka maqaarka, maqaar cuncun leh, calaamadaha fiditaanka iyo findoob.
haddii aad qabtid su'aalo iyo faahfaahin dheeraad ah, halkaan ka weydii
Views: 53325 June 28, 2015, 11:26:21 AM
Views: 17482 March 30, 2011, 01:35:12 PM
Views: 7829 May 14, 2011, 10:14:27 PM
Views: 10664 July 05, 2016, 11:28:25 AM
Views: 16518 June 22, 2009, 08:13:49 AM